Kufanele ukuthi usule Microsoft Word yakho decuments ngephutha ngaphambi, noma Umshana wakho kancane akwenza kulo. Kubukeka sengathi bamshiya nawe, kepha ikhompyutha yakho kungenzeka ine iminonjana nabo endaweni ethile kwi-hard drive yakho. With indlela ilungelo, Amathuluzi kwesokudla, ukwazi ngiphinde ngibabone. Nasi isiqondiso sendlela alulame asusiwe elithi umqulusizinda kusuka drive kanzima.
Izindlela ezimbili ukuze alulame elilahlekile noma ususiwe umculu iZwi
Indlela One: Uma i-Njalo ukudala yokusekelayo ikhophi okukhethiwe, kungase kube ikhophi yokugada ingozi lefayela. Ukuze uthole ikhophi yokusekelayo ye-ifayela, landela lezi zinyathelo:
1. Ukuthola ifolda lapho Wagcina usindiswe ifayela abalahlekile.
2. Ukucinga amafayela ne-. Ifayela wbk Igama ukunweba.
3. Bese ugijime iZwi sivule.
Indlela Two: Sebenzisa Data yokuthola Software kuyindlela yesibili eya alulame elilahlekile noma usule izwi umqulusizinda okuyinto nalo Kunconywa. Leli professional elithi Umculu kusekhona isikhathi fast kakhulu ekutholeni nokululama amaphepha elahlekile noma usule futhi kulula ukuyisebenzisa, awudingi noma iyiphi ekhethekile namakhono obuchwepheshe noma ukuthola idatha.
The version umzila Thwebula bese uyifake, zikhona amawindi version and mac version.
Izinyathelo of Phinda kuyasuswa Word Document
Step 1: Run isofthiwe bese ukhethe imodi alulame ukuze uqale
Faka Wondersahre Data Recovery kukhompyutha yakho bese uqalise hlelo, bese ukhetha "Ifayela Lost Lokubuyisela" Imodi ukuqala ekululameni.
Step 2: Ihlole idrayivu kanzima ukuthola amafayela elahlekile
Ungabona uhlu lwabo bonke ngemoto kanzima kwi computer yakho. Khetha indawo yoqobo lapho izwi lakho umqulusizinda elondolozwe bese uchofoze inkinobho "Qala" ukuqala ihlole computer for the amafayela elahlekile.
Step 3: Fumana asusiwe elithi umqulusizinda
Isofthiwe izobonisa wonke amafayela e elifunyenwe emva kuthwetshulwa, kwakuyodingeka babe ihlelwa izigaba. Ungakwazi okuqukethwe yakho Imibhalo iZwi ngaphambi alulame kuqala. Bese athole ukuthi umbhalo izwi oyifunayo bese hit inkinobho "Phinda".
Inothi: Musa ukugcina walulama amafayela kulo endaweni Orginal godu. Thola olunye ukwahlukanisa noma idrayivu yangaphandle ukugcina kwabo, for ukucabangela ukuphepha.
Nendlela Phinda kusulwe Files kusuka Recycle Bin
Posted on July 28, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba alulame idathaAmathegi Fumana asusiwe elithi umqulusizinda, fumana elahlekile elithi umqulusizinda, izwi Umculu alulame
Langaphambilini post Previous: Idlalwa kanjani amafayela avi on Nexus 7
Next post Next: Kanjani I buyisa izithombe zisusiwe ikhadi kwimemori SD